Rating: 4.4/5 from 6777 votes.
Bio inspired computing and applications 7th international conference on intelligent computing icic2011 zhengzhou china august 11 14 2011 revised papers. Bio inspired computing and applications 7th international conference on intelligent computing icic2011 zhengzhou china august 11 14 2011 revised papers . Bio inspired computing and applications 7th international zhengzhouchina august 11 14 2011 revised selected papers lecture notes in computer science . The paperback of the bio inspired computing and applications 7th international conference on intelligent computing icic2011 zhengzhou china august science . Bio inspired computing and applications 7th international conference on intelligent computing icic2011 zhengzhou china august 11 14 2011 science lecture